Raharaha Houcine Arfa : Lasa paradisa fiskaly ve la Frantsa ? -
AccueilRaharaham-pirenenaRaharaha Houcine Arfa : Lasa paradisa fiskaly ve la Frantsa ?
18/01/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Dia tsy mety tapitra mihitsy ity resa-be tsy mitombina izay hanaovan’ i Houcine Arfa fitetezan-gazety any Frantsa sy hamafazany lainga miaro fanaratsiana olom-panjakana malagasy, ary manohintohina fatratra ny fiandrianam-pirenena. Mihevitra ny gasy ho adala sy azo atao tsinontsinona tokoa ity olon-dratsy Houcine Arfa ity, ary tena manimbazimba sy manaratsy laza ny Malagasy. Nilaza mantsy ity olon-dratsy mpanaratsy ny malagasy ity fa nanome 70 000 Euros, ary 30 000 Euros ny tonia mpampanoa lalàna, izany hoe 100 000 Euros izany no fitambarany. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe taiza no nahitan’i Houcine Arfa vola be tahaka izany, satria tokoa dia tsy maintsy miditra banky ny sandam-bola tahaka izany raha toa mihetsika. Marihina fa nakaton’ny fitsarana ihany koa ny kaontin’ity olon-dratsy ity. Noho ireo rehetra ireo dia mipetraka ny fanontaniana hoe misy ve izany ny vola (trésorerie de guerre) natokan’ny firenena frantsay hanakorontanana firenena malagasy, sa lasa paradisa fiskaly ao Frantsa, sa koa lasa firenena famatsiam-bola ihany koa. Ny fanontaniana goavana mipetraka dia ny hoe ao koa ve ny tany mamatsy vola mersenera sy mampialokaloka olon-dratsy.
Raha akaiky tokoa ny fifidianana izay tanterahina amin’ity taona ity, dia mampieritreritra ihany na ny fanakorontanana saika hataon’i Houcine Arfa teto Madagasikara, na ihany koa izao fanaratsiana tsy misy porofo hitetezany haino aman-jery maro samihafa any Frantsa izao. Matetika tokoa mantsy dia tsy tongatonga ho azy ny zavatra tahaka izao indrindra rehefa atomotra ny fifidianana, ny fitokonana etsy sy eroa miaro fanimbana entana maro isan-karazany. Ho an’ ny sasany tokoa dia azo atao avokoa ny zava-drehetra rehefa mety hanaratsiana olona iray na mpitondra izay mety mbola ho kandida, ary tsy mahagaga ny zava-misy tahaka ity raharahan’i Hocine Arfa ity. Satria tokoa taiza teto an-tany no mbola nisy olona henjehina noho ny asa fanakorontanana izay nahitana basy sy fitaovam-piadiana tao an-trano no tafatsoaka kanefa mitety haino aman-jery sy manaratsy mpitondra. Azo sokajiana ho mpampihorohoro tokoa mantsy ity Hocine Arfa ity, nefa dia mbola miseho amin’ny haino aman-jery ihany. Hiaraha-mahalala ihany koa ny fanenjehan’i Frantsa ireo mpampihorohoro na teratany avy aiza izy na avy aiza, nefa dia toa tsy handrenesam-peo izy ireo manoloana ity raharaha ity. Ny raharaha bataclan izay nahafatesana Malagasy noho ny asa fampihororohana nisy tany an-toerana, ny fitifirana sy fanafihana ny biraon’ ny gazety Charlies Hebdo. Nefa izao izy ireo dia miaro olona sy mampialokaloka olon-dratsy.